Maraykanka oo duqeyn kaga Jawaabay Weerarkii Kiimikada ee dalka Siiriya[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Maraykanka oo duqeyn kaga Jawaabay Weerarkii Kiimikada ee dalka Siiriya[Sawirro]
SIIRIYA – Dowladda Maraykanka ayaa aroornimadii hore ee saaka duqeymo la beegsaday xarumo milatari oo ku yaalla bariga dalka Siiriya.
Weerarkan oo noqonaya kii ugu horreeyey oo uu Maraykanku si toos ah ugu qaado ciidamada Siiriya ayaa noqonay mid Maraykanku uga aargoosanayo dowladda Siiriya oo u ku eedeeyey iney danbeysay weerar loo adeegsaday kiimiko kaasoo todobaadkan ka dhacay gobolka Idlib.
Saraakiisha Milatariga Maraykanku waxa ay sheegeen in 59 gantaal ay ku garaaceen saakay saacadu markii ay ahead 4:40 daqiiqo ee subaxnimo saldhiga ciidamada cirka ee Shayrat.
Weerarkan ayaa laga fuliyey saldhiga ay ciidamada Mareykanka ku leeyihiin bariga badda Mediterranean-ka.
Dowladda Siiriya waxa ay sheegtay in lix askari looga dilay duqeynta.
Saraakiishu waxa ay sheegeen in saldhiga ay weerareen ay aad ugu maleynayaan in ay ka duuleen diyaaradihii talaadadii Kiimikada Sarin Gas-ka ku buufisay degmada Khan Sheykhuun,waxaana weerarkaas ku dhintay in ka badan 100 qof oo shacab ah.
Dawladaha Ruushka oo taageerta dowladda Bashar Al-Asad ayaa cambaareeyey weerarka saakay diyaaradaha Mareykanka ku qaadeen saldhiga milatariga ee bariga Siiriya.
Weerarkan sidoo kale ,waxaa soo dhaweeyey Isbahaysiga mucaaridka Siiriya iyo dalalka Sucuudiga iyo Turkiga ,waxaana cambaareeyey dalalka Iiraan iyo Ruushka oo xiriir dhow la leh Xukuumadda Bashar Al-Asad.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu amray weerarka,wuxuuna sheegay in shaki ku jirin in ay Xukuumadda Siiriya ay isticmaashay kiimikada mamnuuca ka ah adduunka.